Kenya oo Muqdihso ku soo celineysa 17 Qof oo shalay lagu qabta... | Universal Somali TV
Waaxda Socdaalka Dalka Kenya ayaa sheegtay in 17 Qof oo Soomaali ah ay maanta ku soo celineyso Magaalada Muqdisho kuwaas oo shalay lagu qabtay Garoonka.
17ka Qof oo sida ay sheegtay Waaxda Socdaalka kuwajahnaa Uganda ayaa waxaa ay dood dhexmartay iyaga iyo waaxda dakhli Ururinta ee Garoonka JKIA.
Arrintan ayaa dhalatay kaddib markii Xildhibaan Patrick Wainaina, oo ka soo laabtay Imaaraadka safna ku jiray uu arkay dhallinyaro si xor ah ugu socda gudaha Garoonka sidaas oo kalana sarkaal ka tirsan Waaxda socdaalka weydiisanaya in uu astaanta fasaxa ugu dhufto baasabooradooda.
Xildhibaanka ayaa u tagay sarkaalka waxaana uu weydiiyay waxa ay yihiin,waxaana loo sheegay in ay diyaaradi ka keentay Muqdisho kuna jeedaan Uganda,waxaa uu sarkaalkii weydiiyay sababta ay Terminalka 1aad iyo 2aad dhexdooda si xor ah ugu socdaan muddo 10 daqiiqo ah.
Muran dheer kaddib waxaa la iskula laabtay waaxda dakhliga,waxaana la sheegay in dukumiintiyada ay wateen ay been abuuryihiin,Xildhibaanka ayaa codsaday magaca diyaaraddii ay soo raaceen,waxaa uu sawirro ka qaaday seddexda qof ee uu markii hore arkay waxaana uu ogaaday in ay ka badanyihiin oo ay 17 Qof yihiin.
Waaxda Socdaalka ayaa sheegtay in Maanta oo Isniin ah ay 17kaas qof Muqdisho ku soo celin doonto diyaaraddii shalay ka qaadday.
Amaanka Garoonka JKIA ayaa aad loo adkeeyay kaddib markii Sharikadda diyaaradaha ee kenya ay billowday duullimaad toos ah oo Mareykanka ah.
Sharikadda Keyna airways ayaa sheegtay in sidoo kale ay dhawaan billaabeyso duullimaad toos ah oo Muqdisho iyo Nairobi ah.
Kan-xigaLaba qof oo maanta lagu kala dilay de...
Kan-horeShabaab oo magaalada Marka ku dilay n...
47,169,426 unique visits